Vagadziri ve2.5D - China 2.5D Fekitori & vanotengesa
iPhone 2.5D PMMA skrini inodzivirira Haina kumboputsika pamupendero
Inofananidzwa negirazi rakadzikama, PMMA screen muchengeti chigadzirwa chitsva gore rapfuura. Seye yakapfava firimu, yakazara yakazara nehumwe kuomarara. Iwo makuru maficha haana kuputswa uye azere neglue.
iPhone 2.5D zvedongo screen mudziviriri Haana kumbobvira aputsika pamupendero
Inofananidzwa negirazi rakapfava, iyo ceramic chidzitiro chekudzivirira chakagadzirwa neakasarudzika PC + TPU zvinhu, mhando yakapfava skrini yekudzivirira uye yakanyanya hunyanzvi haifanirwe kumbotyorwa. Iine basa reshoma anti-kukwenya uye nehumwe kuomarara, iyo zvedongo skrini yekudzivirira inowedzera uye inozivikanwa mumusika.
2.5D Anti Bhuruu Mwenje Wakatsamwa Girazi Screen Dziviriro ye iPhone 12 akateedzana
OTAO anti-bhuruu mwenje chidzitiro inodzivirira icha chengeta maziso ako akachengeteka uye kuita kushandisa yako iPhone chiitiko chinonakidza. 9H pachiyero chaMoh chekuoma kwemaminerari uye inoratidzira oleophobic inowedzera iyo inowedzera rukoko rwezvigunwe zvemunwe smudge kuramba. Kusiyana nezvimwe zvigadzirwa pamusika, vedu vadziviriri vechidzitiro vanochengeta iko kurongeka kwemavara uye kudedera kweiyo yako iPhone nepo ichichengetedza kubata kwayo kwekunzwa.
2.5D Yakakwira Yakajeka Anti-Guruva Yakadzora Girazi Screen Dziviriro Ye iPhone 12 akateedzana
OTAO's anti static tekinoroji, gadzira ino skrini inodzivirira yakasarudzika kubva muguruva. ​​Inopa zvakakwana kufukidza kuchengetedza kwe iPhone 12 nhepfenyuro, uye inowirirana nekubata zvine mutsindo .Inopawo anti zvigunwe uye hydrophobic zvivakwa.
2.5D 0.33mm Yakajeka Yakatsamwa Girazi ye iPhone 12 akateedzana
100% Transparent & yakajeka yakajeka: Inonyanya Kugadzirirwa Inenge Isingaonekwe screen chengetedzo yeHDD LCD Screens, HAPANA Rainbow Mhedzisiro. Yakakwirira kukanganisa & kukwenya kudzivirirwa: Ultra Yakatetepa ine Maximum Kudzivirirwa kubva Kumusoro Impact Madonhwe, Kukwenya, Makara, uye Mapundu! Yenyaya Yeushamwari: OTAO Screen Mudziviriri yakanyatso kudimburwa kuti ive diki diki pane iyo Chaiyo Screen yeiyo Smart Runhare Kudzivirira Dzimwe Nguva Kupopota neYako Unofarira Foni Yenyaya. Inonzwisisika & nekukurumidza mhinduro: Iine muchengeti wechidzitiro, ...
Samsung S21 Plus 2.5D Yakazara Glue Yakadzora Girazi Screen Dziviriro
Yakapfava girazi rakakomberedzwa screen screen inodzivirira yeSamsung S21 Plus, kujekesa kwakazara uye yakazara kufukidza dhizaini, inopa kumucheto kumucheto kudzivirirwa kwefoni yako.